गण्डकीका जिल्ला अस्पतालमा नर्स र डाक्टर थपिँदै,प्रदेशको स्थापना दिवस कसरी मनाईदै छ त? हेर्नुहोस – Samacharpati Samacharpati गण्डकीका जिल्ला अस्पतालमा नर्स र डाक्टर थपिँदै,प्रदेशको स्थापना दिवस कसरी मनाईदै छ त? हेर्नुहोस – Samacharpati
गण्डकीका जिल्ला अस्पतालमा नर्स र डाक्टर थपिँदै,प्रदेशको स्थापना दिवस कसरी मनाईदै छ त? हेर्नुहोस
पोखरा,१८ माघ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालमा नर्स र डाक्टर थप्ने भएको छ ।
प्रदेश मातहत रहेका ११ वटा जिल्ला अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका लागि करारमा डाक्टर र नर्स थप्न लागिएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा १ १ जना डाक्टर र ११ जना नर्स थप्न लागिएको छ भने अरु अस्पतालमा २,२ जना डाक्टर र नर्स थपिने छ ।सबै अस्पतालमा कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर र रजिस्टर्ड नर्स थपिने छन् । उनीहरुको तलबमान भने टुंगिएको छैन ।
तलबका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले थप ५९ जना चिकित्सक र नर्स थप्नका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर आवेदन मागेको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु बेड थप्न बजेट पठाएको थियो । अधिकांश अस्पतालले आइसियु उपकरण जोडिसकेका छन् भने अरुले पनि सामान किनेका छन् ।यसैगरी गण्डकी सरकारले स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । फागुन ४ गते तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि तयारी समिति गठन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सबै मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरिधारी शर्मा र मुख्य न्यायधिवक्ता डा। राजेन्द्र घिमिरे सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो । मन्त्री परिषद् बैठकले विभिन्न अस्पतालमा नियुक्त गरिएका करारका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
गायक रुद्रसेन बिश्वकर्माको तिहार कोसेली आयो है तिहार” सार्वजनिक भिडियो सहित
सांस्कृतिक संस्थानका दुई कर्मचारीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु